Goorma ayuu Old Spice noqday qabow? | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 14, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Wiilkeyga iyo aniga waxaan ku qasbanaanay inaan ku cararno dukaanka caawa xoogaa caraf udgoon ah. Ma nihin wax ur ama wax uun… wuxuu bilaabay inuu ordo oo sidaas ayuu iga xaday carafteyda. Marka waxaan tagnaa qaybta carfinta ee Kmart maxaliga ah wuxuuna bilaabayaa inuu soo qaato Old Spice. Dhir udgoon? Waxaan xasuustaa Old Spice 30 sano ka hor. Taasi waxay ka dhigan tahay inay hadda tahay Spice Older, sax? Malahayga maya. Waxaa laga yaabaa in gabowga, way fiicnaatay.
Waxaan u sheegayaa inuu iibsado xoogaa wanaagsan 'Mennon ama Right Guard. Maya ayuu leeyahay. Wuxuu doonayaa Old Spice.
Waxaan u sheegayaa inaanan doonaynin gurigaygu inuu dhammaantood stinkin sida dhallinta iyo Old Spice.
Wuxuu ku hayaa Old Spice isagoo wata geeri.
Waxaan u iibsadaa isaga oo ah Old Spice.
Goorma ayuu Old Spice noqday qabow? Maxaa heck dhacay? Maalin maalmaha ka mid ah, waxay isku urursanayaan saabuun baakadaha Kirismaska ​​maalinta xigtana waxay leeyihiin degel websaydh la yaab leh oo la yiraahdo Marka Way Kululaatay (ama… qosolka URL-yada, laga yaabee inay tahay 'Goorta ay Toogatay'). isku qas garaacaaga iyo fiidiyowga goobta qaar ka mid ah isha nacnaca isha ay ku hayaan halkaas. Waa kan fiidiyowgayga.
Old Spice… er… “OS” waxaa laga yaabaa inay heshay sirta ah inay noqoto mid qabow: ha uraynin, tus naag kacsi leh. Hadda waan ogahay sababta wiilkaygu u xushay.
Nasiib wacan taas, Bill! Waxaan raacay Xuquuqda Ilaalada XTREME.
Waxay leeyihiin Skateboarders… woohoo.
Nov 14, 2006 at 9: 59 AM
Nin! Waad samaysay maalintayda, aabahay had iyo jeer wuxuu xiro uunsi hore waxaanan jeclaa urta inkasta oo aanan waligey isticmaalin maxaa yeelay qabow ma ahan, sida sharaabaadyada cad. Waxaan rabaa qaar hada iyo sidee ayaan ku bilaabi lahaa maalin aan la galo suuqgeyn weyn. Viedo waa kuleyl, waxaan rajeynayaa inaan waxbadan ku buufin.
Nov 14, 2006 saacadu markay tahay 11:55 PM
Uma maleynayo in Aabahey mar dambe adeegsanayo… ma raaco sharaabaadkiisa madow, kabaha, iyo surwaalkiisa hoose ee ku yaal Florida. 🙂
Nov 23, 2006 saacadu markay tahay 3:52 PM
Mid ka mid ah waxyaabaha aan ku jeclahay tikniyoolajiyadda - waxay siisaa aaladda shaqo abuurka dadka "caadiga ah". Xaaladdan oo kale, qof kastaa wuu tafatiri karaa filim. Khibraddani waxay qof kasta ka dhigeysaa mid ka mahadcelinaya waxa tifaftire sameeyo. (Iyo madadaalo, sidoo kale).
Ilaa iyo inta Old Spice tagto, weligay ma jeclaan - laakiin maalmahaas waxay ku timid baakad madow oo madow. Caajisnimo iyo weligiis aan qabow lahayn. (Haddana, dhallinta halkaan joogta hadda way ordayaan, iyagoo si sharaf leh u muujinaya sameysmada nigisyadooda. Waqtiyadu way is beddelaan. Noloshu waa baashaal.)